Nepali Rajneeti | अमेरिकाबाट भारत फर्किदा श्रीदेवीकी कान्छी छोरीको हातको टाटुले बन्यो भाइरल : आखिर के छ ?
अमेरिकाबाट भारत फर्किदा श्रीदेवीकी कान्छी छोरीको हातको टाटुले बन्यो भाइरल : आखिर के छ ?
बैसाख १६, २०७८ बिहिबार ३०७ पटक हेरिएको
चर्चित बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीकी कान्छी छोरी अचानक भाइरल भएकी छिन् । खुशी कपूर मार्चमा अमेरिका गइन् । अब उनी फिर्ता आएकी छिन् । उनलाई मंगलबार मुम्बई विमानस्थलमा देखिएको हो ।
खुशीसँग उनका भाई शनाया र अंशुला कपूर पनि साथमा थिए । तीनैजनाले फेसशील्ड लगाएका थिए । अर्कोतिर खुशीको हातमा बनेको टाटुले सबैको ध्यान आकर्षण गर्यो । त्यसमा एउटा सन्देश लेखिएको थियो ।
खुशी कपूर मार्चमा अमेरि जाँदा त्यस समयमा अनुराग कश्यपकी छोरी आलियासँग उनका धेरैजसो तस्विरहरु भाइरल हुने गर्थे । सिल्लाब फोटोग्राफर योगेनशाहको इन्स्टाका अनुसार खुशीले आफ्नो हातमा लेखेका छिन्, ‘बाँकी सबै कुरा स्वचालित रूपमा हुनेछ ।’
खुशी आफ्नी दिदी जाह्नवीको जन्मदिन मनाएपछि अमेरिका गएकी थिइन् । खुशीले अमेरिकाबाट मार्च र अप्रिलको बीचमा आफ्ना फोटोहरू साझेदारी गरिरहेकी थिइन् । त्यहाँ उनी चलचित्र विषय अध्ययन गरिरहेकी छिन् ।
केहि दिन पहिले जाह्नवी खुशीलाई भेट्न लस एन्जलस र पछि न्यु योर्कमा गएकी थिइन् । खुशी फिल्मको दुनियाँमा सम्मिलित हुन चाहान्छिन् । तर उनका बुबा बोनी कपूरले खुशीलाई अहिले चलचित्रमा आउन नदिने बताउँदै आएका छन् ।
एक कुराकानीको क्रममा उनले भनेका थिए, ‘मसँग स्रोतहरू छन् तर म खुशीको सट्टा अरू कसैलाई लिन मन पराउँछु । किनकि म उसको बुबा हुँ र त्यस्ता व्यक्ति बढी नरम हुन जान्छन् ।
एक फिल्म निर्माताको रूपमा, यो गर्न सही छैन । यो एक अभिनेताको लागी राम्रो हुँदैन । म खुशीले आफ्नो पहिचान आफैं बनाएको हेर्न चाहन्छु ।’